ABO: ‘Gochi mirga namoomaa sarbuu lixa Oromiyaatti mul’achaa jiru dhaabbachuu qaba’ – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooABO: ‘Gochi mirga namoomaa sarbuu lixa Oromiyaatti mul’achaa jiru dhaabbachuu qaba’
(BBC Afaan Oromoo) — Gochi mirga namoomaa sarbuu lixa Oromiyaatti mul’achaa jiru akka dhaabbatu carraa arganne hundaan mootummaa gaafachaa turre jedha ABO’n.
Godinaalee lixa Oromiyaa kanneen Komaand Postii jalatti bulaa jiran keessumaa Qeellem Wallaggaafi Wallagga Lixaatti tajaajilli bilbilaa adda citee baatii tokko ta’eera.
Bakka tajaajilli bilbilaa hin jirreefi odeeffannoo argachuun rakkisaa ta’e kanatti, tarkaanfii mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa jedhu waliin nama hedduutti yaaddoo ta’eera.
Dhimmi kun miidiyaa hawaasummaa irrattis dubbii ijoo namoonni waliif qoodaa aariifi yaaddoodhaan irratti haasa’amaa jirudha.
Waan godinaalee Wallaggaa kana keessatti ta’aa jirurratti gama mootummaatiin ibsi gahaan kenname hin jiru. Jiraattotarraa odeefannoo argachuufimmoo tajaajilli bilbilaa adda citeera.
Dhimma kanarratti kan dubbisne Dubbi Himaan ABO Obbo Qajeelaa Mardaasaa, godinaalee Oromiyaa keessa iddoowwan Komaand Postiin bulaa jiranitti gochoonni mirga namoomaa sarban durumaa mul’achaa turuu eeran.
“Uummanni maaf nutti callistu jedhee nu gaafachaa jira? Waan kana silaa furmaata kan itti kennu mootummaadha. Nutimmoo mootummaadhan rakkoo kana furaa, olaantummaa seeraa eegsisuus yoo ta’e sirnaan yaa ta’u, jennee carraa arganne hundaan itti himaa turre,” jedhan.
Gaaffiin mootummaaf dhiheessine fala hin arganne kan jedhan Obbo Qajeelaan, hanga rakkoon kun fala argatutti gaaffii isaanii akka itti fufan himan.
Barattoota yunvarsiitii Dambi Doolloo irraa gara maatii isaanii osoo deebi’anii karaatti butamaniiru jedhame irratti dhaabni isaanii odeefannoo gahaa akka hin qabnes himan.
Barattoota ‘ugguraman’ jedhaman keessaa 21 gadhiifaman
Haa ta’uutii waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo ABO jalatti hoogganamaa ture amala nama butuu akka hin qabne yaadachiisan.
“Waraanni ABO waraana naamusa waraanaatiin qaramedha. Kaayyoo siyaasaafi leenjii gahaa warra fudhatedha. Uummata waliinillee hariiroo akkamii akka qabaatu leenjii gahaa argateeti nuti gaafa duraa kan leenjisaa turre. WBO’n nuti dura beeknu akka warra wangeelaati, namatti hin dubbatu,” jedhan.
Waraana amma bosonatti hafee kanas yeroo ABO jalatti hoogganamaa turetti namuusa kanaan leenjisne jedhan Obbo Qajeelaan.
“Waan nama butuu kana waraanni Bilisummaa Oromoo hin qabu. Kan amma naannoo adda addaa keessatti godhamaa jiru kan namootni qawwee hidhatanii bifa adda addaatiin socho’anii badii hojjetan kun eenyu akka ta’eyyuu wanti beekamu hin jiru,” jedhan.
Rakkoo uumamaa jiru kanarratti akka dhaaba isaaniitti ibsa baasaa turuufi gochichi waan hin dhaabbanneef ammas mootummaan waan kana akka dhaabsisu gaafanna jedhan.
“Uummata nagaa ajjeesuun sirrii miti dhaabbachuu qaba. Namni balleesse seeraan gaafatama malee dirreerratti gaaffii tokko malee ajjeefamuu hin qabu.
Waraana isa hidhatee bosona jira jedhamu waliin garuu lolli bifa fedheyyuu yoo deeme isarraa rakkoo hin qabnu. Suni seera waraanaatiin deema,” jedhan Obbo Qajeelaan.
Rakkoo nageenyaa godinaalee Wallaggaa ammallee yaaddessaa akkuma ta’etti jira jedhu jiraattonni gara naannoo hollaatti baqatanii jiran.
Keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessa Komaand Postii godinaalee kana bulchaa jiruun rakkoon namoota irra ga’aa jiraachuu dubbatu namoonni yeroo waltajjii miidiyaa hawaasummaarratti yaada isaanii kennan.
Waan qabatamaan lafarra jiruufi wantota odeeffamaa jiru mirkaneessuudhaaf ammoo godinaalee kanatti interneetiin erga addan citee bubbuleera.
Bilbillis godinaalee Wallaggaa keessatti hojjechaa waan hin jirreef rakkoo jiru hubachuuf daran rakkisaa taasiseera. Dhalataa Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo ta’uu dubbtu tokko durbiin isaa lamaan kan wajjin guddatan Kibxata kana ajjeefamu hima.
Barattoota Yuunivarsitii Dabra Taabor maaltu mudate?
Jiraattoonni Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo lubbuusaaniif sodaatanii qee’eesaanii gadhiisuun kanneen gara Gambeellaa, Mattuufi Finfinneetti baqachuu isaanii odeeffanne.
Torban tokko dura gara Gambeellaatti dargaggoon baqate kan biraan maqaan isaa akka hin himamne barbaadu haala nageenya naannicha jiru hima.
“Kanin baqadheen haala nageenyaaf waanin sodaadheen. Nama baayyee nu biraa ajjeesanii, Facaasaa ganamaa mariyannee konkolaataan achii deeemne.
Gaafa [makkalakayaan] dhufaan dhaabbachuunis ta’ee fiiguun rakkisaadha. Yoo namni dhaabbates, yoo baqatees nama hin dhiisan,” jedha.